Myat Shu - 2013 February
You are here : Myat Shu » Archives for February 2013
Published By Myat Shu On Tuesday, February 19th 2013. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု
www.terminartors.com အိမ်မက်အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလျှင် .. အလွမ်းရိပ်နဲ့ စရပါလိမ့်မည်..။ လယ်ကွင်းစိမ်းစိမ်းလေးများကို .. အိမ်မက်မက်ပြန်ပြီ.။ စပါးပင်လေးများ လေအတိမ်းမှာ ယိမ်းနွဲ့လှုပ်ခါလို့ ..။ တောင်ကုန်းစောင်းလေးတွေပေါ်က လေညင်းတွေက ပြေပြေလေးတိုက်ခတ်လို့.။ ကောင်းကင်က မှိုင်းညို့ညို့..။ မိုးရိပ်မိုးသားတစ်ချို့တစ်စနဲ့..။ မီးခိုးရောင်မှိုင်းညို့သော မိုးသားတိမ်လိပ်တွေက အနောက်ဘက်မှာ တလိပ်လိပ်တက်လာနေသည်..။ အရှေ့ဘက်မှာ သူမတို့ရဲ့ ရွာကလေး။ အုန်းပင်တွေအုံ့အုံ့ဆိုင်းဆိုင်းနှင့်။ လေ၏ ရနံ့က ..စိမ်းမြသစ်လွင်လှသည်..။ သူမ၏ အာရုံတို့ကြည်လင်ရှင်းသန့်နေပါသည်.။ သူမသည် ဟိုအရင်တုန်းကအိမ်မက်တစ်ချို့လိုမျိုး . လုံမငယ်လေး မဟုတ်ပါ..။ အိမ်မက်ထဲက အိမ်မက်အကြောင်းကို သူမ တစ်ခုမကျန်ပြန်မှတ်မိနေတတ်တာ မထူးဆန်းလှတော့။ အိမ်မက်ထဲမှာ အိမ်မက်မက်ရင်း ကဗျာတွေရေးရေးနေတတ်တာလည်း မထူးဆန်းတော့။ သူမ၏ အိမ်မက်ထဲက ကဗျာများသည် နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီး လှပလွန်းပေမယ့် အိမ်မက်ကနိုးထတိုင်း ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Friday, February 15th 2013. Under ၀တ္ထု, ရသ
“ဒေါက်တာက ကျွန်မကို ထူးဆန်းတယ် ကြောင်နေတယ်လို့ ထင်မလား မသိဘူးနော်။ တကယ်က ကျွန်မ ခဏခဏ အိပ်မက်မက်သူ မဟုတ်ဘူး။ ညနေ စာရင်းပိတ် ငွေသိမ်းရတာနဲ့ အိမ်ပြန်လည်း အမြဲမိုးချုပ်တယ်။ ရေမိုးချိုး စားသောက်ပြီးရင် လူက မျက်တောင် အလိုလို စင်းနေပြီး တုံးကနဲပဲ။ ဘာအိပ်မက်မှ မမက်ဘူး။ မိုးလင်းရင် ဆိုင်ပြန်သွား။ အမြဲ တကြောင်းသွား ဘ၀ပဲ။ ထူးဆန်းတာတွေ ကြုံတာမျိုး မရှိဘူး။ အဲလိုမက်တော့ ကျွန်မ တော်တော်စိတ်ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ နောက်ပြီး……… အိပ်မက်မှာ ကျွန်မကို နာကျင်အောင်လုပ်တာ ဘယ်သူလဲလို့ ဒေါက်တာ မမေးဘူးနော်။ အေးလေ ဒေါက်တာ မေးလဲ ကျွန်မက ဖြေချင်မှ ဖြေမှာကိုး”
Published By Myat Shu On Wednesday, February 13th 2013. Under မျက်ရှု, ဆောင်းပါး
ဘရာဇီးနိုင်ငံရှိ အိန္ဒိယလူမျိုးစုတစ်စု၏ ရိုးရာဓလေ့တစ်ခုမှာ အမျိုးသမီးများ မီးဖွားလျှင် တစ်ယောက်တည်း (ဘယ်သူမှ မကူညီရဘဲ) မီးဖွားရန်ဖြစ်သည်။ မမွေးဖွားနိုင်၍ ဘယ်လောက်ပင် အခက်အခဲရှိရှိ၊ မကူညီရ။ ရက်စက်သည်ဆိုဆို၊ ကလေး မွေးဖွားနိုင်၍ မိခင်ရော၊ ကလေးပါ အသက်ဆုံးရှုံးရတာလည်း ရှိသည်။ သူတို့၏ ယုံကြည်မှုက လူရယ်လို့ ဖြစ်လာလျှင် ယောက်ျားဖြစ်စေ၊ မိန်းမ ဖြစ်စေ၊ မိမိ၏ ဒုက္ခဆင်းရဲကို မိမိ ဘာသာ ခံစားကျော်လွှားရမည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ အဖြစ်အပျက်များစွာကို ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ ဂျရက်ဒိုင်းမွန်း၏ နောက်ဆုံးထုတ် စာအုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ စာအုပ်အမည်က "မနေ့ကအထိ ကမ္ဘာကြီး" (The World Until Yesterday)တဲ့။ "အစဉ်အလာရိုးရာ လူ့အဖွဲ့အစည်းများမှ ဘာတွေ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Wednesday, February 13th 2013. Under မျက်ရှု, နှလုံးသားစာမျက်နှာ
"ငါ့သည်းက မာပါတယ်" ဆိုပြီး ထားခဲ့ခံရတဲ့မိန်းမ လောကမှာ ဘယ်နှစ်ယောက်လောက် ရှိပြီလဲ။ သူပျောက်သွားသလိုပဲ ဖြုန်းခနဲ နွေရောက်ပြန်ပြီ ။ ထွေးပွေ့သူမဲ့ခဲ့တဲ့ အေးစက်စက်ခန္ဓာကိုယ် ဟာ လေနှင်ရာကို သွေ့ခြောက်စွာလွင့်ပါရဦးမယ် ။ .............အလွမ်းဆိုတာကတော့ ... ဘယ်ရာသီဥတုနဲ့မှ မလိုက်ဖက်ပါဘူးကွယ် .................. သွားရင်း လာရင်း ဆက်လက်လှုပ်ရှားရုန်းကန်ရင်း အင်္ကျီလက်နဲ့ပဲ ခပ်ကြမ်းကြမ်းသုတ်ပစ်ခဲ့ရတဲ့ မျက်ရည်တွေ .... ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို ဘယ်သူ့ဆီကမှ တောင်းဆိုခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ ဘ၀ပေးအသိတွေ ........................................................ ကောင်းတဲ့အရာတွေက ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးရယ်လို့ အလိုလိုရို့ကျိုး သိမ်ငယ်စိတ်တွေ ........................... အရှုံးပေးခြင်းနဲ့ အလျှော့ပေးခြင်းကိုသာ အလှည့်ကျ ကျင့်သုံးခွင့်ရတဲ့ ဘ၀ဖြစ်စဉ်တွေ .................... ဒဏ်ရာရပြီးသားသူက ခံနိုင်ရည်ပိုရှိတယ်လို့ မောင်တို့ယောင်္ကျားတွေကို ဘယ်အရာက သင်ကြားခဲ့ပါလိမ့်။ ရွေးချယ်စရာမရှိလို့ ကယောင်ခြောက်ခြား သတ္တိရှိနေရသူတွေကို မနာကျင်တတ်ဘူးရယ်လို့ ... လူ့လောကတစ်ခုလုံး ထင်မှတ်မှားခဲ့ ။ မြတ်ဘုရားရှေ့မှာ ဘယ်သူကမှ လက်မခံတဲ့ မေတ္တာတွေ လေးလေးနက်နက်ပို့ ။ ခံနိုင်ရည်အလိုအလျောက်ကုန်ဆုံးသွားမယ့်ရက်ကို အကြီးမားဆုံးဆုတစ်ခုလို မျှော်လင့်စောင့်ကြို ။ သားသမီးတွေကို မြတ်ဖေဖေကျေးဇူးတွေမပါဘဲ အထိအခိုက်မရှိ ရှင်သန်ကြီးပြင်းအောင် ... Continue Reading